I-cape yisici sokuma komhlaba esakhiwa isiqeshana somhlaba noma inhlonhlo esukela ogwini iye olwandle. Ngokuya ngenani lomhlaba ongena olwandle, lingaba nomthelela emisakazweni yolwandle. Kusuka kulezi zinkokhiso, kudalwa ugu olunamagagasi amaningi noma 3dp5dt gassy. Izintambo zisetshenziswe kuwo wonke umlando ekuzulazuleni ukugcina ithrekhi yogu futhi kulapho kwafakwa khona izibani zokukhanya.
Kulesi sihloko sizokutshela yini ikapa nokubaluleka enakho kumandla asogwini. I-cape ngumqondo noma osetshenziswa kokubili ku-geography naku-geology ukukhombisa isici sendawo esakhiwe isiqeshana somhlaba esisuka ogwini siye ngaphakathi kolwandle. Kule ndawo amanzi aphansi futhi enza ukuhamba kwemikhumbi kube nzima.
Ngaphezu kwalokho, imisinga yasolwandle iyathinteka yilolu shintsho ku-morphology yendawo. Phakathi kwezimpawu ezisemqoka esizithola ekapa ukuthonya imisinga yasolwandle ngoba kuyisandiso esiphuma olwandle. Sekungamakhulu eminyaka izigqoko zisetshenziswa njengendawo yokukhomba amatilosi njengoba enikeza ukubonakala okukhulu kwezwekazi futhi evikela imikhumbi ezingozini ezahlukahlukene olwandle oluvulekile olunazo. Ukuba khona kwamakhaphethi kwanika amathuba amakhulu okusinda uma kwenzeka isehlakalo esingalindelekile, ngakho-ke, iningi lezindondo ezibaluleke kakhulu emhlabeni kwakuyizindawo ezinamasu zokufakwa kwezindlu zokukhanya eziqondisa amatilosi.
Ngabe namuhla, nge-satellite navigation amalambu alahlekelwe ukubaluleka kwawo. Manje usungayazi indawo ngesikhathi sangempela nganoma yisiphi isikhathi futhi noma kuphi emhlabeni. Ngaphezu kwalokho, hhayi kuphela i-morphology yendawo eyaziwayo, kodwa futhi nengaphakathi lolwandle. Lokhu kwenzelwa ukuvikela izingozi ezahlukahlukene zokushayisana kwezikebhe ngamathiphu obubanzi bezintaba ezingaphansi kwamanzi. Le ngxenye encane ephumayo yogu ibinokubaluleka okungokomfanekiso kuwo wonke umlando.
Endulo ukuphela kwensimu kwakuyi-Cape. Isibonelo, ingachazwa ngegama leCape Finisterre. NgesiLatin leli gama lisho ukuphela komhlaba futhi lisogwini lwaseGalicia. KumaRoma asendulo leli phuzu noma ekugcineni okukhulu kwendawo yonke esentshonalanga. Lapho uzothola enye yezindawo zokukhanyisa eziyizifanekiselo zekhulu leshumi nesishiyagalolunye futhi iyindawo eyaziwa ngokuphahlazeka komkhumbi okwehlukile nezinye izimpi ezenzekile. Manje sizohlaziya izihloko ezibaluleke kakhulu emhlabeni ngokubaluleka kwazo kwamasu nokuheha kwazo izivakashi.
Igama elithi intambo lisetshenziselwa amafindo ezikebhe. Akubalulekanga nje kuphela ukubhekela imisinga yasolwandle engakwazi ukukhiqiza inqwaba yokwakheka komhlaba ngasogwini, kepha futhi kufanele ube nokuphepha ezikebheni. Izingxenye ze-cape ikakhulukazi okuqinile, isifuba kanye nesiswebhu. Isiswebhu yigama okumelelwa ngalo ukuphela kwekapa. Konke okunye ukuqeqeshwa kwaziwa njengokuqina. Ngokwakhiwa kwe-cape, noma iyiphi i-arc noma i-curvature eyakha yonke indawo yaziwa njengesono.
Okuqukethwe yi-athikili kunamathela ezimisweni zethu ze izimiso zokuhlelela. Ukubika iphutha chofoza lapha. Ikheli lakho le ngeke ishicilelwe. Inkomba 1 Yini ikapa 2 Izigqoko ezibaluleke kakhulu emhlabeni 3 IKapa ngezikebhe.Omunye izinhlobo endala lokuzivivinya kuthiwa ukhipha kubha. Kuyini futhi lokho marekhodi kule umsebenzi? Sihlaziya lezi zinkinga ngokuhamba isihloko. Lo msebenzi ubizwa ukuba ngokuphelele wonke umuntu ezaziwayo.
Siye sabona izithembiso zakhe esikoleni. Othile iziqondiso belambatha ngoba iphakama, umuntu uye wasebenzisa zona sawo esiningi futhi abanye baye banikezela izifundo phezu ingxenye oluvundlile ebalulekile empilweni yakho.
Classic silingo kubha bezilokhu ngempela umsebenzi onzima, futhi nalabo ababesazi kahle indlela abawenza, njalo savusa isasasa phakathi kwabanye. Kungakanani, ngokwesilinganiso ukudansela isiginci sakhe ovamile? Ukubala kuzothatha isikhathi esingakanani, amadoda yebo, kuphela, they epha lesi sivivinyo lula kakhulu kunabesifazane. Ngakho, uma ukhumbula ngokomzimba Ezifundweni esikoleni, amazinga evamile abafundi basesikoleni esiphakeme kwaba izikhathi ezingu Abanye, ngokusebenzisa ukuqeqeshwa, ukufinyelela izikhathi Ekugcineni, ephezulu ezingeni abasubathi, isikhathi esiningi Sizokwenza iphakama, ungahlinzekela izindlela ezinikezwa.
Ukukhuluma ngokwesilinganiso, njalo indoda ngisho kancane abathintekayo kwezemidlalo, uyakwazi ukubamba izikhathi Kodwa lokho irekhodi lomhlaba ukuze iphakama? Lo mbuzo oyithandayo abantu abaningi, hhayi nje abasubathi.
Abantu nje uzibuze ukuthi ezingeni ingaqala ukusebenza kwabo lesi sivivinyo. Eqinisweni, akekho iyiphi irekhodi eyodwa yawo iphakama kubha. Kulesi umsebenzi, kukhona inani elikhulu kokuphakanyiswa kwamagama, okwadala eziningi ezahlukene impumelelo okusezingeni eliphezulu. Ezimweni eziningi, irekhodi emhlabeni wonke iphakama isikhathi ezahlukene enikelwe ukuzivocavoca, iyiphi indlela enza.
Ingabe i-insulin enamafu imbi?
Ngokwesibonelo, ahlukile ngokwanele iyiphi ukuphindaphinda kungase kungafaneleki isigaba esisodwa. Ingxenye zesifazane lwesintu, futhi, uye wahlanganyela ukuzuzwa imiphumela ephezulu.Ngisho noma iStrip eyaziwa kakhulu yaseLas Vegas igcwele kakhulu izibani ze-neon kanye nezinye iziphazamiso eziningi, kungukuthi kunzima ukulahlekelwa iStatosphere Tower.
I-behemoth engaba ngufoot-ende ibonakala kusuka noma yikuphi eSin City. Emadolobheni awaziwa ukuthi uyavuma, kusengenangqondo ukuthola ukuthi kukhona ukugibela okujabulisayo phakathi kombhoshongo. Ukuziphendulela nakakhulu kunabantu abacabanga ukubeka ukugibela phezulu kwe-Stratosphere: amantongomane abagibelayo. Ungaba phakathi kwemiphefumulo enesibindi engathi ingacabangela ukungena ekugijimeni phakathi kwezingxabano zobuqili?
Ngaphandle kokuthi ungumuntu oqinile, cishe okungenani okukodwa kokukhangayo kungakunikeza isikhashana-uma kungakusikuthumeli umsila wakho phakathi kwemilenze yakho. Ayikho enye yezimoto eziyobe iphawuleka ngokukhethekile uma itshalwe phansi. Kodwa ngaphezu kwamamitha angaphezu kuka ngaphezulu kwe-terra firma, bonke bangaphandle kwendle.
Omunye wabo angase abe ngumklamo othakazelisayo, noma ongesabekayo emhlabeni. Futhi ezinye izigibeli ezimbili zizokwenza kube uhlu oluphezulu Konke mayelana nokuthakazelisa kwengqondo, futhi lokhu kugibela kunika i-acrophobia incazelo entsha.
Awudingi ukuthola izithukuthuku ezibandayo uzibuza ukuthi uzoba nesibindi sokugibela i-High Roller. I-Stratosphere yaqeda ukuqhuma kwe-roller ngonyaka ka ukwenza indawo yezinye izigibeli ezibalwe ngezansi. I-Roller ephezulu yeka igama elihle! Yayiyi-coaster enhle kakhulu. Ngejubane eliphakeme lika mph, akukho ukuphazamiseka, ukungabi nokusheshisa okukhulu noma ama-g-force, futhi neze namaconsi, kwakunjalo esigabeni "somndeni" se-coaster.
Yiqiniso, ukulimaza okuzungeze phezulu kombhoshongo, ngisho nangama mph, kwakusalokhu kunzima. Ukuphakama okuphezulu, nokwesaba ukuthi i-harness engaphezu kwehlombe kungenzeka ukuthi ayikugcinanga ivikelekile esihlalweni, isitimela kungenzeka ukuthi asizange silondolozwe ngokuqondile emthonjeni, noma ithrekhi kungenzeka ukuthi ayihlanganisiwe ngokuqinile embhoshongweni, ukuhlinzekela lokho okujabulisayo.
Ungayikhetha kanjani ikhompyutha yedeskithophu
Uma kungenjalo, i-High Roller yayiyi-coaster yangaphakathi. Uma ufuna ukugibela ama-rails, kunezinye izinkokhelo ze- Las Vegas roller. Ngendlela, uhambo luhlala-ngegama nanoma yikuphi. I-Linq, ebuye itholakale naseLas Vegas Strip, iphinde ibuyele igama layo ngesondo eliphakeme elibhekele ukubuka izinyawo ezingu I-Roller ephezulu njengamanje isondo elikhulu lokubuka emhlabeni.
Lena yindawo yokudonsa imfucuza yama-hydraulic freefall, efana nabaningi abatholakala emapaki.Zonke ozithandayo imidlalo yekhadi lakho ebambelela ngokuqinile emphakathini wanamuhla. Emphemeni of amakhadi bese abangani abambalwa ezinhle ukusiza badlulisele noma iyiphi yokuzilibazisa ngezinga elingakanani.
Kuyinto imfihlo ukuthi amadoda ceba eziningi imidlalo ukudlala emphemeni of amakhadi. Uyitholephi isiqalo ukudlala amakhadi akho futhi bobabili babizwa ngokuthi ngaphambili? Ikhadi amasudi abakuthola iyathakazelisa kokubili nayizimfundamakhwela kanye ochwepheshe. Njengezinye izinto eziningi zasendulo, amamephu elithakazelisayo, ngokuvamile kubhebhethekiswe ngu izinganekwane kanye izinganekwane, umlando.
Njengoba yasungulwa kudala, akekho ongazenza kahle lapho zenzeka. Nokho, kukhona amanye amaqiniso athakazelisayo eziphakamisa ukuthi amakhadi siqala usilika Empire. Ngo isichazamazwi yamaShayina yasendulo lithi ukudlala amakhadi - yifa China lasendulo, futhi yilapha lapho wawusakazeke ngakho. Ngokwalo mbono, amasudi ezine zifanekisela zonyaka.
Ngaphambi kokufika iphepha amakhophi yamaShayina yasendulo wasebenzisa "Ibalazwe" lwendlovu, ukhuni, ngisho Japanese imbaza amagobolondo. Ekhulwini nantathu phezu okujabulisayo "umdlalo kwezilwandle" laziwa eGibhithe naseNdiya. Europe Ufunde ngayo ngemva kwenye Emakhulwini amabili eminyaka. Kuvele Eqinisweni ezithakazelisayo wukuthi ukubukeka amakhadi insimu yalo kuvumelana nokuhambela ngenjongo Roma. Ngo imibala esivamile umdlali yesimanje futhi ine indaba ngabanye.
Njengasezinsukwini zokuphuma ubudala okuthiwa Ikhadi amasudi abakuthola? Kuvame efanekiselwa umkhonto noma imbali. ERussia, kwaba ngaphansi esankondlo - "lokwela".
Amagama anjengathi, okungenzeka kakhulu ngenxa uhlobo sibalo omelela suit owenza okufanayo izinto eshiwo ngenhla. Kodwa elinye igama yayidumile eRussia ezinsukwini zakudala. Nakuba amakhadi eladabuka iChina, iFrance waziletha ushintsho yabo. Lanezela amasudi French e emphemeni nokudlala. Njengoba lolu khetho u emhlabeni wonke ukusakaza. Njengoba umlando ubonisa, suit ekuqaleni wabonakalisa knight izimfanelo inalienable - inkemba namaqembunengcula iziqongoisihlangu worms kanye izingalo tigubhu.
Manje akunzima ukuqonda ukuthi kungani ikhadi ngaphambili amasudi iphakama ngokuthi ngakho. ENdiya, lezi zithombe ezine abe nencazelo ehluke kakhulu. Isudi ngalinye lalimelela isigaba esithile - kwamadoda asebukhosini, abathengisi, abefundisi kuphela, futhi-ke, isikhundla senkosi. Ekhuluma iNkosi. Imidlalo yemakhadi bebelokhu ezingaphezu kuka ethandwa. Akunjalo kudala yabe seyaziwa ukuthi ngisho esikhathini zasebukhosini yaqhakaza ukukopela. Lokhu "namaqhinga elingenacala, 'wasebenzisa bazibeka njengamakhosi, okuyinto kunzima ngempela angena amakhanda kwabantu abavamile.
Kokubili manje nangesikhathi ngaphambi kokuba siqhubeke impela isizumbulu semali. Abagembuli bavame ulahlekelwe kuya nines futhi ngaphandle futhi bazithola izikweletu. Sikhishwe lesi simo, laqala ukusetshenziswa ukuvinjelwa kuqala ku ukugembula, okuyinto kakhulu kwanciphisa inani abagembuli bakukhonzile. Wonke umdlali self-ukuhlonipha kufanele wazi umlando umdlalo, kuhlanganise amabalazwe.
Yini thina ayephambi?I-insulin isophane iyi-insulin esebenza phakathi nendawo eqala ukusebenza kungakapheli amahora amabili kuya kwayi-2 ngemuva kokujova, iphakama I-4 kumahora wefuthi iqhubeka nokusebenzela i- I kumahora we IHumulin N isetshenziselwa ukuthuthukisa ukulawulwa kukashukela egazini kubantu abadala nasezinganeni ezinesifo sikashukela.
Kufanele ngigcine kanjani UNovolin N? Do Ungasebenzisi UNovolin N uma ngabe iqandisiwe. Gcina kungavulwa UNovolin N ebhokisini ukuvikela ekukhanyeni. I-insulin ejwayelekileeyaziwa nangokuthi hlangothi insulin futhi encibilikayo insulin uhlobo lwesenzo esifushane insulin. Isetshenziselwa ukwelapha isifo sikashukela sohlobo 1, isifo sikashukela sohlobo 2, isifo sikashukela sokukhulelwa, kanye nezinkinga zesifo sikashukela ezifana nesifo sikashukela ketoacidosis kanye nezifundazwe ze-hyperosmolar hyperglycemic.
INQUBO: Ukukhuphuka kwamanani emithi kadokotela kukhuphuka, kudala ukukhala kuzwelonke kanye nesinqumo sangempela sokukhetha phakathi kokudla nemithi esindisa impilo. I-insulin yihomoni esebenza ngokwehlisa amazinga kashukela ushukela egazini. UNovolin N umaphakathi- esebenza i-insulin eqala ukusebenza kungakapheli amahora amabili kuya kwayi-2 ngemuva kokujova, iphakama emahoreni ama-4 kuye kwayi-4, futhi iqhubeke nokusebenza amahora ayi kuye kwayi Umjovo we IHumulin R U kufanele kufanele kulandelwe ukudla kungakapheli imizuzu engama yokuphathwa.
Ububanzi obumaphakathi bezidingo eziphelele ze-insulin yansuku zonke yokwelashwa kwesondlo kwiziguli eziphathwe i-insulin ngaphandle kokumelana ne-insulin okunzima kuphakathi kuka Kusebenza okwesikhashana insulin.
Isebenza ngokusiza ushukela wegazi ushukela ungene kumaseli ukuze umzimba wakho ukwazi ukuwusebenzisela amandla. Lo muthi uvame ukusetshenziselwa ukuhlangana nokusebenza okuphakathi noma okude insulin umkhiqizo. Lo muthi ungasetshenziswa wedwa noma nezinye izidakamizwa zomlomo zesifo sikashukela njenge-metformin.
IHumulin R i-insulin yomuntu uhlobo olusebenza okwesikhashana lwe-insulin. I-insulin isiza ukulawula amazinga kashukela egazini ku-diabetes mellitus, kufaka phakathi uhlobo lwesifo sikashukela no-1 nohlobo lwesifo sikashukela. IHumulin R ithandwa kakhulu kunezidakamizwa ezifanayo. IHumulin R U, lapho isetshenziswa ngendlela engaphansi, imvamisa inikezwe izikhathi ezintathu noma ngaphezulu nsuku zonke ngaphambi kokudla. Umthamo nesikhathi IHumulin R U kufanele ukwenziwa umuntu ngamunye futhi uzimisele, ngokuya ngezeluleko zikadokotela, ngokuya ngezidingo zesiguli.
I-insulin esebenza okwesikhashana.Wonke Amalungelo Agodliwe. Ukusebenza kokuhlunga kwamagciwane yinani lokumelana nempahla yokuphefumula ekungeneni kwamagciwane. Uma imiphumela iphakama njengephesenti, kuphakamisa ikhono lezinto zokumelana nokungena kwamagciwane. I-biology staphylococcus aureus aerosol isetshenziswa kakhulu ezivivinyweni. Ikakhulukazi ngesikhathi somqedazwe we-COVID esikuwo, ukusetshenziswa kwezimaski zobuso ezivikelayo ngaphakathi kwesilinganiso semishini yokuzivikela kukhuphuke kakhulu.
Ukusebenza kokuhlunga kwalezi zimaski kuyindlela ebalulekile ekhombisa amandla abo okuhlunga izinhlayiya, amabhaktheriya namagciwane.
Amaski wokuzivikela nawo afakwa kwenye indlela yokuhlola evumela ukuthi kuhlolwe ubukhulu bezinhlayiyana ezahlukahlukene nokungena kwazo kubonakale. Kodwa-ke, ukuhlolwa kokusebenza kahle kokuhlunga kwamagciwane kunikeza izinzuzo eziningi ngaphezu kokunye ukuhlolwa kokusebenza kokuhlunga, ngakho-ke kuyaqhubeka nokusetshenziswa noshintsho oluncane iminyaka. Ngokuvamile, lezi zivivinyo zenziwa kanye nengcindezi lokwehluka Delta P. Ukuhlolwa kwengcindezi okwehlukile kuyasetshenziswa ezintweni ezidizayinelwe ukuvikela kuma-aerosol webhayoloji njengamaski obuso bezokwelapha, imijiva yokuhlinzwa, izigqoko zekhanda kanye nezihlungi zomoya, nokuphefumula kwesifihla kunqunywa ngokwendlela yomehluko wengcindezi.
Ngesikhathi sokuhlolwa, kukalwa ingcindezi yokwehlukanisa ukudonsa umoya endaweni elinganisiwe endaweni yokugeleza komoya njalo. Le protocol ifaka phakathi izindlela zokuhlunga ukusebenza kwezinhlayiyana PFEukusebenza kahle kokuhlunga kwamagciwane BFE nokusebenza kahle kokuhlunga amagciwane VFE ukukala ukusebenza kahle kwamamaski.
Izindlela ezimbili zokuqala zikhuluma ngokusebenza kahle kwezinto ezisetshenzisiwe njengesithiyo ukuvikela abasebenzisi kuma-aerosols aqueous viral. Ukuhlolwa kokusebenza kahle kokuhlunga kwenziwa kusetshenziswa i nm usawoti i-aerosol ngokuya nge-ASTM F ejwayelekile. Ukuhlolwa kokusebenza kahle kokuhlunga kwamagciwane kwenziwa ezintweni zokuhlunga nakwimishini eyenzelwe ukuvikela kuma-aerosol webhayoloji, njengamaski obuso, imijiva yokuhlinzwa, izigqoko nezihlungi zomoya.
Esikhundleni salokho, lolu vivinyo lusetshenziselwa izicelo ezingama K zamaski ezokwelapha. Izicelo ezingama K zenzelwe ukukhombisa ukuthi okokusebenza kwezokwelapha kucishe kulingane ngokuphepha kanye nemithelela kumathuluzi athengiswa ngokusemthethweni ngokusemthethweni njengamanje. Uma i-US Food and Drug Administration i-FDA inquma ukuthi lo mshini ulingana nempahla emakethwa ngokusemthethweni, leyo mishini ayivunyelwe futhi ayivunyelwe ukuthi ibekwe emakethe.
Le ncazelo ichaza izindlela zokuhlola nezidingo zezinto ezisetshenziswa ekwenzeni imaski yobuso bezokwelapha esetshenziswe ekuhlinzekweni kwezinsizakalo zezempilo. Ibuye inikeze ukuhlukaniswa kokusebenza kwempahla yemaski izuru x reader bezokwelapha. Lokhu kusebenza kusekelwe ekusebenzeni kokuhlunga kwamagciwane, ukucindezela okwehlukile, ukusebenza kahle kwe-submicron particle filtration, ukumelana nokungena kwegazi lokwenziwa nokuvutha.
Le ndlela yokuhlola isetshenziselwa ukukala ukusebenza ngokusefa kwezinto zokwenziwa kobuso bezokwelapha.
Lezi zivivinyo zisuselwa enanini lezinselelo zebhaktheriya ezikhuphukayo ekugxileni kwezinsalela ezisezansi. Ukusebenza okuphezulu kokuhlunga okunganqunywa ngale ndlela yokuhlola, okuyindlela yokulinganisa, kungamaphesenti angama Izinga le-EN liyizinga laseYurophu.
Leli zinga liyisilinganiso okufanele busikiwe buso bezokwelapha. Izidingo zokuhlolwa kwaleli zinga zifaka phakathi ukusebenza kahle kokuhlunga kwamagciwane, ingcindezi ehlukile ukuphefumulaukumelana ne-splash nokuhlanzeka kwamagciwane.Uma ufuna ukukhetha ikhompyutha yedeskithophu uyakwazi lokho emakethe kunezinhlobo ezahlukahlukene zemikhiqizo enezinzuzo zonke onawo.
Kepha asikafiki esikhathini esithuthuke kakhulu sokuthola ikhompyutha ephezulu ene-edishini ephakeme kunaleyo ongayiphakamisa, kufanele wazi ukuthi ungayikhetha kanjani evumelana kahle nemakethe yamanje nezidingo zakho. Kukho konke ukuthuthuka esinakho emakethe yethu, Singathola ikhompyutha yedeskithophu yobungcweti, eyakudala noma esezingeni eliphezulu, kufanele ukhethe eyodwa evumelana kangcono nezidingo zakho bese ubheka ukunikezwa kwentengo esezingeni eliphakeme, elifanela iphothifoliyo yakho.
Ikhompyutha yedeskithophu Kuyithuluzi elenzelwe ukutholakala endaweni efanayo elungisiwe, Ayinakho ukuzimela okuthile kwezokuthutha njenge-laptop, kepha kufanele ibekwe ngendlela emile. Lolu hlobo lwekhompyutha luqukethe umbhoshongo, isikrini, ikhibhodi, igundane nezinye izinto ezifana nezipikha noma iphrinta.
Lezi zinhlobo zinikeza isiqinisekiso kuqhathaniswa nezincwadi zokubhala lapho zisebenza kangcono kakhulu futhi zinamandla amaningi okucubungula.
Lapho ufuna ikhompyutha Kufanele ucabange ngokucophelela ngokusetshenziswa ozokunika khona ngaleso sikhathi noma esikhathini esizayo, yingakho isiphakamiso sakho sizonquma uhlobo lwekhompyutha ozoyidinga. Kukhona indlela yokuhlanganisa ikhompyutha yakho futhi uyenze ibe namandla kakhulu futhi yonge. Kulokhu zibizwa ngama-white label label. Futhi kukhona elinye ithuba lokuthenga ikhompyutha yomkhiqizo ngewaranti nensizakalo yezobuchwepheshe enikezwa yilowo mkhiqizi.
Kepha uma okudingayo kungukuthi ikhompyutha yokudlala imidlalo enamandla njenge-Minecraft, i-CS Go noma i-Fornite intengo iyakhuphuka kusuka cishe ku kuye phambili futhi uzodinga:. Izici zilingana nedatha yangaphambilini, esizoyidinga kuphela iprosesa yesizukulwane sesihlanu, i-Intel: i7. Into ebalulekile lapho uthenga ikhompyutha ukubuka lezi zinto ezintathu ezibalulekile: iprosesa, ikhadi lemifanekiso nememori. I-Intel Core izokunikeza ithuba lokuthi ikunikeze noma iyiphi yalezi zigaba kuye ngezici ozozisebenzisa kukhompyutha yakho.
Kuyinkumbulo yesikhashana engenakuphathwa ngumsebenzisi, njengoba izophatha ukucubungula yonke imininingwane egcinwe yikhompyutha.
VULA IZIMPAWU ZONKE ZANGAPHAMBILI
Lolu hlobo lwemininingwane egciniwe luzoba idatha edingwa isistimu yakho ezoba obhekene nokwenza imisebenzi ehlukahlukene kukhompyutha yakho lapho uyidinga. Ihlobene kakhulu nezicelo, uma iphakama i-RAM, kungcono ukuthi uzophatha lezi zinhlelo zokusebenza ngoba zidinga isikhala sokugcina esengeziwe. Ingabe yilowo ikuvumela ukubuka izithombe namavidiyo kahle. Uma ufuna ukwazi kabanzi ngamakhadi wehluzo ungabheka lesi sixhumanisi. Kuzoba nesibopho sokugcina yonke imininingwane oyicubungulayo futhi ofuna ukuyigcina kukhompyutha yakho.
Ukuphakama komthamo, izindleko ziyanda. Kunezinhlobo ezimbili zezinkumbulo: Ama-SSD angamadrayivu aqinile aqinile futhi bazibolekisa ngokuba namandla amancane, kepha ziyashesha kakhulu futhi zibiza kakhulu cishe i GB ; nama-HDD: ngomthamo ophakeme kepha kuhamba kancane enkambisweni, nazo zishibhile kakhulu kunezangaphambili.
Okuqukethwe yi-athikili kunamathela ezimisweni zethu ze izimiso zokuhlelela. Ukubika iphutha chofoza lapha. Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Indlela yokuphila » Ubuchwepheshe » Ungayikhetha kanjani ikhompyutha yedeskithophu. Ikheli lakho le ngeke ishicilelwe. Inkomba 1 Ungayikhetha kanjani ikhompyutha yedeskithophu? entweni ezimbi ezingakwehlela, ngu Dec manje kungenzeka noma yini.
awazi ukuthi yini eyanonisa ingulube, izokusiza imimoya iphakama noma yinini. ezimbi ezingakwehlela, ngu Dec manje kungenzeka noma yini. ukuthi yini eyanonisa ingulube, izokusiza imimoya iphakama noma yinini. uke uzibuze kuthi mawungene kulendawo yini eyenza kusuke ubumnyama kuvele MBAXAMBILI UMGXAMU - IHLUZE IMFENYENKAWU - IPHAKAMA NUKANI - SHIPHAMBEMU. Kulesi sihloko sizokutshela yini ikapa nokubaluleka enakho kumandla asogwini.
Inokuphakama kwamamitha angama futhi iphakama ngaphezu koLwandle. Angikhumbuli noma umama wake wasiqabula yini noma wasigona thina zingane Nokho, ingozi iphakama lapho umuntu engalulami, lapho umuntu okhungethwe usizi. The Escapists, you've done the crime but can you survive and do the time? The Escapists is a unique prison escape sandbox game where you get to experience a. Kepha mhlawumbe iGran Canaria ehamba phambili ikulindele enkabeni yesiqhingi, lapho unamadolobha amahle njenge UFataga, Imibimbi o Tejeda futhi iphakama.
I-placenta ihanjiswa futhi i-prolactin iphakama, ukuhlala phezulu ezinyangeni zokuqala ngemuva Kungenzeka yini ukuthi ukhulelwe nge-prolactin ephezulu? Namuhla sizokutshela ukuthi yini okudingeka yenziwe ukuze kuqinisekiswe ukuthi Imibuzo elandelayo iphakama: Yini engenziwa ukuze ugweme isibhedlela. Yini ukubona e Samara. Idolobhana lizungezwe indawo enhle engokwemvelo.
expanses iVolga, entabeni iphakama, izindunduma omkhulu ngokubabazekayo ukwanelisa. Uma uthengise amasheya, ungajwayelana nazo zonke izinkomba, njenge-NASDAQ Composite Index, iDow Jones Industrial Average (DJIA), uRusselliS & P Kodwa, njengoba kwenzeka kamuva, akekho owake wabona noma yini. Ngesikhathi iLamende iphakama esiteji futhi yaqala ukuhlabelela ingoma yakhe. Kwesinye isikhathi iphakama ngokuziqhenya ngamacembe, kwesinye isikhathi kubonakala sengathi ifuna ukucasha phakathi kweziqu.
1 Yini ipistil? Lolu cwaningo luzophinda lubheke ukuthi imithi ngabe ihlukene yini 6 Kungabe akhona yini amagama emithi akhomba umthelela wempucuko yaseNtshonalanga? yifa China lasendulo, futhi yilapha lapho wawusakazeke ngakho. bobabili babizwa ngokuthi iphakama ngaphambili suit ikhadi Yini thina ayephambi? Umfula iVolga ngumfula omude kunawo wonke futhi onamandla kunawo wonke eYurophu onamakhilomitha angama nokugeleza okuphakathi kuka m³ / s. Iphakama. ukugxila kakhulu ekwehliseni izinga lokushisa kunokuthola ukuthi yini ebangele lokho.
kodwa ingozi iphakama phakathi nonyaka wesibili wokuphila. Kubanikazi bezimoto abangenalwazi, le nkinga iphakama ngenxa yokuntuleka Kungenzeka yini ukuphasa ukuhlolwa emaphoyiseni omgwaqo ngaphandle komnikazi? U WONDER BEAN NGESIZULU KUTHIWA YINI.
UTHOLAKALAPHI NGOBA AMAKHEMISI ESINTU AMANINGI ABAWAZI? Yin Lee athul ongayazi. Mkhulu thokoza. Bengicela umuthi mom's. Yini evule izimbobo ongqimbeni olungaphezulu lwe-ozone yomoya osemkhathini wethu?
ayobona ingalo kaNkulunkulu enamandla iphakama, hhayi ngenjongo.
Ghaziabad faridabad ki single jodi
Install gaussian 16 mac